Libagojele abaseNigeria abebephoqa abaqwayizi ukuba babasebenzele ngenkani | News24
Libagojele abaseNigeria abebephoqa abaqwayizi ukuba babasebenzele ngenkani
eGOli - IJaji eNkantolo eNkulu yasePitoli ithole abesilisa ababili abadabuka kwelaseNigeria benecala lokushushumbisa abantu.
IJaji uRonel Tolmay uthole lezi zelamani u-Obioma Benjamin Abba, 32, noChinedu Obasi, 38, benecala lokuqhuba ibhizinisi lokudayisa ngomzimba efulethini eliseSunnyside.
Laba balahlwe yila macala kodwa baphunyuka kwamanye amabili abandakanya ukukhwabanisa nokugcina leli bhizinisi.
U-Obasi utholakale enelinye icala lokuphula umthetho wabokufika ngokushada owesifazane wakuleli ukuze athole ubuzwe kodwa akazange ahlale naye.
UNolwazi Mkhonto ungowesimame wakuleli owaqashisela laba ngefulethi yena akazange abekwe icala ngezenzo zabo.
OLUNYE UDABA:Abaqwayizi baseSunnyside bawaqedile amadoda bewaqola
Ngesikhathi kuqulwa icala, abaqwayizi ababili banikeze ubufakazi bokuthi u-Abba kanye no-Obasi bebabagxisha izidakamizwa bebagcine kuleli fulethi ngenkani bebakhipha ebusuku kuphela ukuze beyosebenza njengabaqwayizi.
Babephoqwa ukuba banike laba basolwa yonke imali abayisebenzile futhi babeshaywa uma bephuma emgqeni.
UTolmay uthe yize laba besifazane bebevele besebenza njengabaqwayizi futhi bazivumela ngokwabo ukujoyina lezi zelamani, banikezwa indawo yokuhlala nezinsiza ezihambisana nakho kanye nezidakamizwa ngemibandela yokuthi bazosebenza njengabaqwayizi.
Bebengavumelekile ukuphuma endlini noma yinini uma bethanda futhi lezi zelamani bezibaqola ngendlela emangalisayo zibaphathisa okwezigqila.
Bobabili laba besifazane sebegcinwe endaweni ephephile, kanti kunxuswa nabanye abaqwayizi ababhekene nalobu bunzima ukuba basondele ngaphambili ukuze bezovikeleka.